ungazivimba kanjani izinombolo zocingo ku-ios, i-android, kanye newindows phone
none Izindaba Nokubuyekezwa Ungazivimba kanjani izinombolo zefoni ku-iOS, i-Android, neWindows Phone
Ungazivimba kanjani izinombolo zefoni ku-iOS, i-Android, neWindows Phone
Ukuba nomakhalekhukhwini kuyisibusiso nesiqalekiso. Into enhle ngokuba neyodwa ukuthi ungashayela abangani nomndeni nganoma yisiphi isikhathi, kunoma iyiphi indawo. Okungaba kuhle kangako, kepha, ukuthi kwesinye isikhathi ungahle ukhathazwe ngabantu ongafuni ukukhathazwa yibo. Cabanga izintombi ezindala, abaqoqi bezikweletu, lowo mfana okunikeza isivumelwano 'sombulali' kumshwalense wemoto, uthola umbono. Vele, ungahlala unikeza umphathi wakho ucingo bese ubacela ukuthi bavimbele izinombolo ezithile zefoni. Kepha uma kwenzeka wena ungumsebenzisi we-smartphone, kufanele ukwazi ukuzivimba ngokwakho. Nakhu ukuthi uvimba kanjani izinombolo zefoni ku-iOS 7, Android, nakuWindows Phone 8.
Ukubeka ohlwini lwabantu abathile noma izinombolo zocingo ku-iOS 7 empeleni kuyinkqubo elula impela ngenxa yesici sokuvimba esakhelwe ohlelweni. Uma kungukuxhumana othanda ukuthi umvimbile, iya kuhlelo lwakho lokusebenza lwefoni, uvule imininingwane yalowo oxhumana naye, skrolela phansi ezansi kwekhasi bese ushaya u-'Block This Caller '. Uma kuyinombolo ethile oyidingayo ohlwini lwabangenayo, yithole kuhlu lwamakholi akho lwakamuva, thepha isithonjana se-'i ', skrolela phansi bese wena & apos; uzobona inketho ethi' Vimba lo oshayayo ' Qaphela ukuthi ukuvimba inombolo kwenqaba izingcingo kuphela, kepha nemibhalo ethunyelwe evela kuyo. Izingcingo ze-FaceTime zivinjelwa futhi. Izingcingo ezinqatshiwe zizovela ku-log yakho ngegama lomuntu ovinjelwe nama-apos; noma inombolo ebomvu.
Ukuvimba oxhumana nabo nezinombolo zefoni ku-Android kungenziwa ngenye yezindlela ezimbili: kungaba ngosizo lohlelo lokusebenza olwenzelwe injongo, noma kusuka kuhlelo lokusebenza lwefoni yakho. Ingxenye ekhohlisayo, nokho, ukuthi akuwona wonke amadivayisi we-Android anesici sakamuva esakhelwe ngaphakathi. Amanye afaka izingcingo zakamuva ze-Samsung, LG ne-HTC. Uma ungumnikazi wedivayisi ye-Samsung, vula uhlelo lwakho lokusebenza lwefoni, shaya inkinobho ethi 'Imenyu', bese ukhetha 'Amasethingi wekholi'. Inketho yokuqala ohlwini yilokho okudingayo - 'Ukwenqatshwa kwezingcingo'. Vula leyo menyu bese ufaka izinombolo ozidingayo ezivinjelwe kulolo hlu. Le nqubo icishe ifane kakhulu kwihendisethi entsha ye-LG. Efonini ye-HTC esebenzisa i-Sense UI version 5 nangaphezulu, vula i-Phonebook yakho bese uthepha inkinobho ethi 'Imenyu' ekhoneni eliphezulu kwesokudla. Khetha 'Oxhumana Nabo Abavinjiwe' bese ufaka izinombolo ozidingayo ezivinjelwe kulolo hlu.
Ngenye indlela, kunezinhlelo zokusebenza eziningi ku-Google Play Isitolo ezingavimba izingcingo nemibhalo engadingeki. UMnu Number ungomunye wabantu abadume kakhulu phakathi kwabo. Izovimba izinombolo ozibalulayo, noma ivimbele noma ngubani onenombolo yocingo efihliwe ukuthi angakuphazamisi. Futhi, ungabika imiyalezo ebhaliwe yogaxekile ukuze abanye abasebenzisi bangakhathazwa yiyo. Ungathola inombolo kaMnu mahhala kusuka ku- Dlala isitolo.
Ukuze ukwazi ukufaka ohlwini lwabantu abamnyama kudivayisi yeWindows Phone 8 udinga ukuba nesoftware ye-GDR2 futhi isebenze kuyo. Usengadinga uhlelo lokusebenza olwengeziwe, noma kunjalo. Lokho wuhlelo lweNokia & apos; s + isihlungi sohlelo lokusebenza lwe-SMS, olutholakala ku-WP Marketplace. Lapho ifakiwe, ingeza inketho yokuvimba ku-handset & apos; s App app yakho. Bamba umunwe wakho kunombolo oyidingayo ivinjiwe kuze kuvele imenyu futhi kufanele ibe lapho. Noma uma uthanda, iya kumenyu yakho yezilungiselelo bese uskrolela phansi ezansi. Yilapho & apos; s lapho isigaba sesicingo se-call + SMS sikhona. Yilapho futhi lapho ususa khona okufakiwe ohlwini lwakho lwezinombolo ezivinjiwe. Uhlelo lokusebenza lokuhlunga lwe-SMS + limahhala futhi ungaluthola kulo lapha .
shayela izinhlelo zokusebenza zokudlulisa ze-android
I-s9 vs s9 + impilo yebhethri
abiza malini ama-smartphone
I-Amazon Prime Video isiyatholakala ku-Android TV nakuChromecast
Futhi isivumelwano sokuqala samahhala se-iPhone X BOGO siya ku ... AT & T.
Ifoni yakho ithatha izithombe ezifiphele? Nakhu ukulungiswa okulula
Idethi yokukhishwa kwefoni ye-LG Rollable, intengo, izici nezindaba
Iziphesheli ezihamba phambili ze-iPad Cyber ​​ngoMsombuluko
I-Samsung Galaxy S21 128 GB vs 256 GB vs 512 GB: iyiphi okufanele uyithole?
I-Java Loop Ngokusebenzisa Uhlu
Le mibala emine ye-Galaxy Z Flip 3 iqinisekisiwe